Uhlelo lwesine lomncintiswano wamaManga kaNorma | Izincwadi Zamanje
Yebo, izisekelo ze- Umncintiswano wesine wamaManga wokuHlelwa kukaNorma. Isikhathi sokwamukelwa uphela ngo-Agasti 31, 2009 ngo-23: 59, ngakho-ke bonke labo abakubona ufanelekile, unemikhawulo ebanzi yokwethula umsebenzi wakho. Umklomelo unamanzi amaningi ngakho-ke umzamo uwufanele. Lapha ngezansi ngikushiya ifayili le- lezisekelo ukuze ukwazi ukuzibukeza ngokuningiliziwe:
1.- Inhloso yomncintiswano ukwethula umbono wokuthuthuka okwalandela kwamakhasi angama-160. Le volumu izokwethula indaba yokuziphetha, kepha leyo eshiya isiphetho esivulekile ekuqhubekeni okungenzeka. Kufanele iqukathe ama-protagonists akhangayo futhi achazwe kahle.
2.- Imisebenzi ethunyelwe lo mncintiswano kufanele ibe ngeyasekuqaleni futhi ingashicilelwa ngayo yonke indlela yayo, futhi ingalethwanga komunye umncintiswano noma yenziwe yaziswa obala (kokubhaliwe nokuphrintiwe).
3.- Ingqikithi, isitayela nohlobo lwenhlobo kumahhala futhi iphrojekthi ezokwethulwa iqukethe:
* Isifinyezo sesakhiwo somsebenzi endaweni encane yeshidi eli-1 kanye namashidi ama-2 (uhlangothi olulodwa). Amafayela we-DOC, RTF noma we-TXT ayamukelwa.
* Ukwakhiwa kwamakhasi okuqala ayi-8 (amashidi ayi-8 ahlangothini olulodwa) womsebenzi. Owinile kuzodingeka ukuthi aqhubeke nokuthuthukisa indaba aze aqede amakhasi ayi-160 adingekayo.
* Ungangeza ikhava ngokuzithandela (kokumnyama nokumhlophe noma umbala) kanye namashidi ezinhlamvu.
Amaphrojekthi angavezwa ngomzimba (ephepheni) noma ngefomethi yedijithali. Akunasimo lapho okwangempela kufanele kuthunyelwe, ngoba akukho lutho lapho izinto ezitholwayo zizobuyiselwa. Amakhasi kufanele adwetshwe ngosayizi olingana no-4 x 11,5 cm (usayizi wokuphrinta wokugcina), ubukhulu obukhulu bomdwebo wokuqala noma umdwebo ongenamkhawulo, kepha kukhawulwe ku-17,5 x 23 cm (kanye no-35 cm wegazi) ubukhulu be-inked kanye nedokhumenti ehloliwe. Noma iyiphi inqubo yokudala ingasetshenziswa, kucatshangelwa ukuthi umsebenzi uzoba ngombala omnyama nomhlophe nokuthi kufanele uyinki. Imisebenzi efakwe ngepensela noma ngombala ngeke yamukelwe. Ukusetshenziswa kozimele noma bedijithali, kanye neminye imininingwane yefomethi yoqobo, izinkomba ezibekwe ku-NORMA Editorial Manga Style Book ezingathintwa kule webhusayithi kufanele zilandelwe. Kuzobhekwa nekhwalithi yokukhiqizwa kabusha kwamaphrojekthi (amakhophi, amakhophi, amafayili edijithali ...). Uma amaphrojekthi ethunyelwa nge-imeyili, amakhasi kufanele abe nge-JPG (4 dpi resolution, quality medium) noma ifomethi ye-PDF (medium compression).
5.- Kungabonakaliswa imisebenzi emikhulu emi-3 ngombhali ngamunye, ngawodwana noma njengengxenye yeqembu lababhali. Kuwo wonke amaphrojekthi ahanjisiwe, imininingwane elandelayo kufanele icaciswe:
* Igama nesibongo
* Ikheli eligcwele
* ICorreo electrónico
* Unyaka wokuzalwa
* Isipiliyoni sobuciko, uma sikhona
Umncintiswano ungowamazwe aphesheya ngokwemvelo, ngakho-ke abazongenela ubuzwe nobudala bangaziveza.
6. - Umklomelo uzoba nenkontileka yokushicilela ukuqedela umsebenzi emakhasini ayi-160 esewonke futhi izoshicilelwa yiNorma Editorial. Le nkontileka izobandakanya ukukhokhwa kwangaphambili kwama-royalties namalungelo wokumelwa okungama- € 2.000 amakhulu.
Isikhathi sokungeniswa siphela ngo-Agasti 7, 31 ngo-2009: 23 pm, isikhathi se-peninsular. Yonke imisebenzi etholwe ngemuva kwalesi sikhathi ngeke ingene emncintiswaneni. Igama lalowo owinile lizomenyezelwa ngemithombo yezindaba ye-NORMA ngo-Okthoba 59, ehambisana neXV Barcelona Manga Fair.
8. - Ijaji elikhethwe yi-NORMA Editorial lizokhipha isinqumo esivuna umsebenzi owodwa futhi lizokwazi ukuthola ukuthi ngabe bakhona yini abanye abafinyelele kowamanqamu. I-NORMA Editorial izoxhumana nomnqobi uma umncintiswano uhlulekile futhi, ngemuva kwalokho, isimemezelo esisemthethweni sizokwenziwa. Ukuqala komsebenzi kuzobaluleka, kanye nekhwalithi yobuciko kanye nokulandisa okucacile. Ijaji linelungelo lokumemezela ukuthi umklomelo awunalutho.
Amaphrojekthi kufanele athunyelwe kukheli elilandelayo:
Ukuhlelwa kwe-NORMA (Umncintiswano WamaManga)
UPasseig de Sant Joan, oneminyaka engu-7
Noma nge-imeyili ekhelini:
Akunasimo lapho okubhaliwe okuthunyelwe kungabuyiselwa. Kubalulekile ukufaka imininingwane edingekayo ephuzwini 5. Ukwamukelwa kwamaphrojekthi kuzoqinisekiswa kuphela nabangenele umncintiswano nge-imeyili, kungakhathalekile ukuthi bathumele imisebenzi yabo ngaluphi uhlobo.
10.- I-NORMA Editorial inelungelo lokushicilela amakhasi omsebenzi owinile kwimidiya yedijithali noma ephrintiwe ukuze kwaziswe ngesinqumo somncintiswano.
Ukubamba iqhaza kulo mncintiswano kusho ukwamukelwa kwale mithetho.
Ngeminye imininingwane ungachofoza kulokhu isixhumanisi.
Indlela ephelele ye-athikili: Izincwadi Zamanje » Izinhlobo » Amahlaya » Uhlelo lwesine lomncintiswano wamaManga kaNorma
Yulen ramos perez kusho
Ngifuna umdwebi wamakhathuni ozobamba iqhaza emncintiswaneni, sengivele ngiyenzile indaba futhi nginemiqondo eminingana yeminye imisebenzi
Uma kukhona onentshisekelo, ngibhalele kule msn: Mangaku_93@hotmail.com
Ngiyacela, kuyiphupho lami ukubhala imanga ngolunye usuku, kodwa ngeshwa kufanele ngicwenge imidwebo yami ngokuhamba kwesikhathi.
Phendula uYulen Ramos Pérez
Sawubona ngifisa ukwazi ukuthi ngingayitholaphi i-NORMA Editorial Manga Style Book ukungiqondisa, ngiyabonga
ingabe kufanele ibe ngefomethi yokufunda yasempumalanga?
(kwesokudla kwesobunxele) noma kungaba ukufunda ngasentshonalanga
Yebo, kufanele kube yiNtshonalanga kuneMpumalanga, kepha uma kwenzeka, thintana nabakwaNorma ukuze uqiniseke. Siyabonga ngokudlula lapha.
UMarechal nokuza kwakhe kwaphakade kuza ...